गर्भपतन चक्की खाँदै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् साइडइफेक्टहरु | सुदुरपश्चिम खबर
गर्भपतन चक्की खाँदै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् साइडइफेक्टहरु
कतिपय अवस्थामा यो चक्की लिएपछि भ्रुण पूर्ण रुपमा गर्भाशयबाट बाहिर निस्कन पाउँदैन । त्यसको केही अवशेष बाँकी रहन्छ ।
यो चक्की केवल ५० दिनभित्र सेवन गरिसक्नुपर्ने छ । यद्यपि कतिपयले यसलाई गर्भ रहेको तीन, चार महिनासम्म पनि सेवन गर्छन् । यसले रक्तश्राव धेरै हुने र संक्रमणको भय पनि बढाउँछ । खसमा यो चक्कीले शरीरमा बनिरहेको प्रोग्नेन्सी हर्मोन प्राजेस्टेरानको उत्पादन बन्द गरिदिन्छ । यही कारण भ्रुण गर्भाशयबाट अलग भएर बाहिर आउन थाल्छ साथै गर्भाशयको संकुचनले रक्तश्राव बढाउँछ । गर्भपतनको चक्कीले पेटमा अत्याधिक दुखाई हुनसक्छ । अनलाइनखबरबाट